Lavanila : takina ny fitahirizana manara-penitra (NewsMada) | AEMW
Lavanila : takina ny fitahirizana manara-penitra (NewsMada)
Na firenena voalohany mpanondrana lavanila maneran-tany aza i Madagasikara, maro ny lesoka mila arenina. Anisan’izany ny fitahirizana azy, ny kalitao, ny ady amin’ny halatra lavanila, sns.
Nisy atrikasa natao tany Toamasina, manodidina ny lalam-pihariana lavanila, ny 8 aogositra teo. Hoentina any Farafangana, ny 20 aogositra ho avy izao, ny fehinkevitra savaranonando, haroso any amin’ny atrikasam-pirenena. Nojerena avokoa ny lesoka sy ny vahaolana hoentina amin’ity lalam-pihariana ity.
Navoitran’ireo mpivory fa tsy ampy ny fifehezana sy fampisehoana ny maha matihanina ny lafiny lavanila. Toy ny toeram-pitahirizana tsy manara-penitra. Vahaolana hita amin’io ny tsy maintsy hananan’ny mpandraharaha trano manokana, ary tsy ekena ny anaty trano fonenana (villa). Fantatra koa fa tsy maintsy harahina ny fepetra amin’ny fanaraha-maso, ary tsy maintsy apetraka mialoha ny 30 aogositra ho avy izao ny antontan-taratasy fangatahana fahazoan-dalana any amin’ny fitantanam-paritry ny varotra sy ny fanjifana, hanomanana ny fidinana ifotony hanaraha-maso. Hatramin’ny 20 aogositra ho avy izao ny fe-potoana farany
handraisana ny anaran’ny mpandraharaha afaka manondrana any ivelany.
Olana iraisan’ny lafiny lavanila sy ny lalam-pihariana hafa koa ny tsy fandriampahalemana. Miantraika sy mampidina ny kalitaon’ny vokatra ihany ny fangalarana mialoha ny fotoana tokony hahamasaka azy. Anisan’ny olana koa ny famokarana ny ilomenaka lavanila, satria tsy voafehy intsony ny fakana ny raviny. Tsy mifanaraka amin’ny fotoana mampety ny vokatra aondrana any ivelany rahateo ny fotoana fijanonan’ny fakana ny raviny, ka vao mainka miantraika any amin’ny kalitaony.
Tena ampiasana ny lavanila aondrana any ivelany ny ranomanitra sy ny fanaovan-tsakafo ary ny sigara. Firenena tena mpanafatra azy i Sri Lanka, Indonezia, Singapour, Kaomoro, Brésil. Firenena mpamokatra voalohany eran-tany i Indonezia, ary voalohany amin’ny fanondranana any ivelany i Madagasikara, mitazona ny 42%-n’ny tsena. 16.000 t ny naondrantsika ny taona 2015.
← Atsimo Andrefana : mijanona maro anisa hatrany ny mpanjono (NewsMada)
Ravalomanana-Chissano : « Tsy vahaolana ny hetsika an-dalambe » (NewsMada) →